काठमाडाैँ। २५६५ औं बुध्द जयन्तीको आजको अवसरमा बुध्दत्व प्राप्त महान् गौतम बुध्द (Gautam The Enlightened)प्रति श्रध्दापुर्वक नमन गर्दै मानवजातीका सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु। यस पावन दिनले हामी सबैलाई जीवनलाई मुक्तियात्राको रुपमा बुझ्न र त्यसदिशामा सकरात्मक ढङ्गबाट अघिबढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस्।
गौतम बुध्द नेपालमा जन्मेको र नेपालको सन्तान भएकोमा हामी नेपालीहरु गर्व गर्छौं। त्यो स्वाभाविक र सही पनि छ। तर हामी नेपालीहरुले बुध्दका महान् एवं महत्वपुर्ण शिक्षाहरुलाई कति ग्रहण र अत्मसात गरेका छौं ? यो पक्षमा पनि गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसलाई आत्मसात गरी जीवन ब्यबहारमा लागुगर्न सके अझ बास्तवमै गर्व गर्न सक्ने हुनेथियौं कि !
बुध्दले केही शास्त्र पढेर र केही आफ्नो मनमा लागेका कुरा कुशल तर्कका रुपमा शान्ति शान्ति भन्दै शिक्षा दिएका होइनन् र त्यसरी बुध्द भएका होइनन्। निश्चित बैज्ञानिक बिधिको अवलम्वन र अभ्यासद्वारा बुध्दत्व प्राप्त गरेपछि त्यसक्रममा उपलब्ध हुन आएको ज्ञानलाई बाँडेका हुन्। बुध्दलाई महान् भन्ने ,बुध्द प्रति गर्व गर्ने तर बुद्धप्रकृया ( Buddha Phenomenon ) लाई आत्मसात नगर्ने वा अझ बिरोध गर्ने कार्य एकै साथ सही हुन सक्दैन।
बुध्दले यो ज्ञान दिएकि सबै मान्छेमा बुध्दत्वको संभावना अन्तर्निहित हुन्छ। तर यो समाजमा सवै एकै साथ बुध्द बन्न सक्दैनन् ,यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो। तर बैज्ञानिक बिधिको अभ्यास र त्यसमा आधारित सतपथले कसैलाई बुध्दत्वको बिन्दुमा पुर्याउन सक्छ भने आमरुपमा जीवन मुक्तियात्रालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन ,असल एवं सार्थक मान्छे बनाउन योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यो बैज्ञानिक बिधि ध्यान ( Meditation ) हो। यस सन्दर्भमा पुर्वीय दर्शन र चिन्तनमा योग लाई जोड दिईएको छ। योग भनेको योगासन मात्र होइन ।आसन योगको एउटा अङ्ग मात्र हो र ध्यान पनि यसैको एक महत्वपुर्ण अङ्ग हो। योग , ध्यान भन्नासाथ चलनचल्तीको धर्म वा आदर्शवाद बुझ्नु गलत हो ।यो एक बैज्ञानिक प्रकृया हो।
तसर्थ बुध्द जयन्तीको यस अवसरमा बुध्द प्रकृया (Buddha Phenomenon ) लाई बुझ्न र योग -ध्यानको नियमित अभ्यास द्वारा लाभ लिन सबैमा बिनम्र अनुरोध गर्दछु। तर हाम्रो समस्या रुपचन्द्र बिष्टले भन्नुभए जस्तो “सिध्दार्थ गौतमको प्रकृया भएर गुज्रन तयार (अर्थात सत्य वा लक्ष प्राप्तिको निम्ति त्यसले माग गर्ने सम्पुर्ण समर्पणको प्रकृया ) नभई बुध्द भएको ढोङ गर्नु हो।” यसबाट माथि उठ्न कोशिस गर्दै बुध्दका शिक्षाहरुलाई अत्मसात गरौं।
(-माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले २५६५ औं बुध्द जयन्तीकाे अवशरमा समािजक सञ्जाल फेसबुकमा ब्यक्त गरेकाे बिचार।)